RAHARAHA PARC TSIMBAZAZA : Mampiahiahy ny firehetana nitranga, misokatra ny fanadihadiana
Omaly alarobia 24 novambra 2021, tokony ho tamin’ny efatra ora maraina tany ho any, nitrangana firehetana goavana tao amin’ny « Centre nationale de recherche sur l’environnement Tsimbazaza ». 2 décembre 2021
Fahamaizana nahatalanjona olona maro teto an-drenivohitra sy ny manodidina ny zava-nitranga. Betsaka ireo velom-panontaniana ka nilaza ny hoe fifanandrifian-javatra ve sa niniana natao ny fandorana manoloana ireo olana maro mianjady amin’ity valan-javaboary ity amin’izao fotoana ? Andrasana fatratra ny valin’ny famotorana mikasika ny raharaha aloha hatreto.
Araka ny loharanom-baovao voaray, omaly, aloha dia voalaza fa fifampikasohan’ny herinaratra tao amina efitrano iray no niantombohan’ny loza izay niitatra tamina trano maromaro hafa avy eo. Nahazo vahana tao anatin’ny fotoana fohy ny afo na dia voalazan’ireo nanatri-maso aza fa tonga ara-potoana ireo mpamonjy voina nananosarotra ny fifehezana ny fahamaizana. Vokany, trano famakiam-boky iray, laboratoara miisa roa, birao telo, ary trano fitahirizana miisa dimy no fantatra fa levon’ny afo tanteraka tsy misy raisina intsony. Omaly maraina ihany dia tonga teny an-toerana ny talen’ny CRE , ny talen’ny CNRIT, ny Polisy misahana ny heloka bevava sy ny Polisy siantifika ary ny tale Jeneralin’ny fikarohana siantifika mba hanokatra ny famotorana lalina avy hatrany.
Hafahafa sy mampiahiahy ny zava-misy …
Nandritra ity fahamaizana ity moa raha ny loharanom-baovao hatrany dia fantatra fa saika tapitra may kila levon’ny afo avokoa ny antontan-taratasy rehetra tao amin’ny birao. Raha tsiahivina, andro vitsivitsy izay no niakatra Fitsarana teny amin’ny PAC (Pôle anti-corruption) ireo mpitantana ny Parc Tsimbazaza noho ny raharaha fanodinkodinam-bolam-panjakana ka nidoboka eny Antanimora ny alatsinainy 22 novambra 2021 lasa teo ihany ny talen’ny Parc Tsimbazaza Randrianirina Jasmin Emile. Ny antony nahavoatazona ity tale ity raha ny angom-baovao voaray dia voampanga ho nanao fanodinkodinana volam-panjakana, fanomezana tombondahiny olom-pantatra ary fanamparam-pahefana.
Manoloana ny fahamaizana nitranga tao Tsimbazaza sy ny tale izay nadoboka am-ponja dia hita soritra tokoa aloha izany fa misy zavatra tsy milamina mihitsy ao. Nipetraka ny fanontaniana feno ahiahy ankehitriny ny amin’ny mety ho fifanandrifian-javatra sy ny fanahiniana natao tsotra izao vokatry ny olana marobe misy saingy miandry ny valin’ny famotorana avokoa hatreto ny mpanara-baovao.
Fanodinkodinana saim-bahoaka fotsiny ?
Raha ny resaka nandeha teo aloha teo ihany koa mikasika ny ao amin’ny Parc Tsimbazaza dia nisy tokoa ny fanambaràna izay nilaza fa hokarakaraina sy hotantanan’ny « fondation axian » mandritra ny 30 taona ny « Parc Botanique et Zoologique » Tsimbazaza, nampiteraka resabe sy tsy fitovian-kevitra tokoa izany. Hitan’ireo mpitsidika ny toerana tokoa mantsy fa lasa tsizarizary no sady lasa tsy voakarakara ireo biby, mihasimba tanteraka ireo fotodrafitrasa ao anatiny, tsy misy intsony ny fahadiovana, ireo biby arovana ao zara raha misy fikarakarana. Izany hoe mila fanavaozana goavana sy fanarenana ary maro mihitsy no nanao fitarainana sy antso momba io tranga io mba hanairana ny Mpitondra Fanjakana. Taorian’ny fihaonan’ny solontenan’ny mpiasan’ny Parc tsimbazaza tamin’ny Sekretra Jeneralin’ny Minisiteran’ny Fampianarana Ambony sy Fikarohana ara-tsiansa ny faha 18 novambra 2021 dia tapaka indray fa foana ny fanomezana ny fitantanana ho an’ny « fondation Axian ».
Nanamafy tamin’izany ny Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa Elia Assoumacou Béatrice fa « tsy marina ny filazana fa homena ny fondation Axian ny fitantanana ny Parc Tsimbazaza mandritra ny 30 taona. Manome tetibola manokana hikarakarana ny biby sy handoavana karaman’ny mpiasan’ny Parc Tsimbazaza mihitsy ny Fanjakana, mampidi-bola ihany koa ny Parc kanefa iaraha-mahita fa ratsy karakara ireo biby ary tsy voaloa ara-potoana ny karaman’ny mpiasa. Voalaza ho fanodinana saim-bahoaka fotsiny ihany manoloana ny fanodinkodinana volam-panjakana sy fanararaotam-pahefana nataon’ireo mpitantana ny Parc ny filazana fa homena hotantanan’ny tsy miankina ity valan-javaboary ity.
Raha ny sehatra momba ny tontolo iainana eto Madagasikara dia tsy vao izao akory no nisy fahamaizana biraom-panjakana, raha tsiahivina izay vao tsy ela akory fa ny 15 jolay 2020 teo amin’ny ONE Antaninarenina (office national de l’environnement) no levon’ny afo. Hatramin’izao, mbola tsy fantatra mazava ny valin’ny famotorana momba ny firehetana ary matetika dia saika very an-javona ny tranga toy izao. Andrasana indray izany aloha hatreto ny valim-pamotorana momba ny tao Tsimbazaza ity.